Nubia Red Magic 3S: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Nubia Red Magic 3S ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan maqleynaa dhammaan noocyada xanta ah ee ku saabsan Nubia Red Magic 3S. Taariikhda la soo saaray taleefanka ayaa horeyba u ahaa mid rasmi ah, iyo faahfaahinta ku saabsan taleefanka ayaa daadanayay, sida awooddeeda. Ugu dambeyntii horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay cusbooneysiintan taleefanka ciyaaraha ee nooca Shiinaha, kaas oo si rasmi ah loogu soo bandhigay wadankaaga.
Waxaa lagu cusbooneysiiyaa horumarro gaar ah, oo leh processor wanaagsan. Marka taas Nubia Red Magic 3S waxaa loo soo bandhigay qaab aad u awood badan, taas oo shaki la’aan bixin doonta waxqabad wanaagsan markasta. Gaar ahaan haddii aan xisaabta ku darsanno taas tusaalaha caadiga ah ee horeyba looga tegey dareen wanaagsan.
Naqshadeynta ma aysan soo marin isbedelo aad u fara badan marka loo eego qaabkii asalka ahaa. Waxay u egtahay telefoon ciyaar, ama sida telefoonka ciyaaraha loo filayo inuu maanta ka daawado suuqa. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la ilaaliyay in geesaha ay yihiin kuwo xasaasi ah, sida moodelkii asalka ahaa, waayo-aragnimo u fiican ciyaaraha waqti kasta.
Nubia Red Magic 3 ayaa si rasmi ah u timid Spain
1 Tilmaamaha Nubia Red Magic 3S
Tilmaamaha Nubia Red Magic 3S
Waxaa jira isbeddelo gaar ah marka la barbar dhigo tusaalaha asalka ah, sidaa darteed Nubia Red Magic 3S waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u awood badan. Marka waan ka heli karnaa xitaa waxyaabo badan markaan ka ciyaarno. Isbedelada qaarkood ee hagaajiya taleefanka horeyba nooga tagay dareen wanaagsan marka la eego waxqabadka, oo loogu yeeray inuu bahal ku noqdo arimahan. Kuwani waa tilmaamaha rasmiga ah ee taleefanka:
Shaashad: 6,65-inji AMOLED oo leh xallinta Full HD + 2.340 x 1.080 pixels
Kaydinta: 128/256 GB
Kaamirada hore: 16 Xildhibaan
Kaamirada gadaal: 48 MP
Batariga: 5.000 mAh oo leh Charge Degdeg ah 27W oo la jaan qaadi kara Xallinta Degdegga ah ee 4.0
Isku xirnaanta: GPS, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth, USB-C, qalabka dhageysiga, 4G / LTE, GLONASS,
Kuwa kale: Dareenka faraha, Qaboojinta dareeraha isku dhafan, Nalalka RGB, Cidhifyada xasaasiga ah
Nidaamka hawlgalka: Android Pie oo leh Redmagic OS 2.1
Cabirrada: 171,7 x 78,5 x 9,65mm
Miisaan: 215 garaam
Nubia Red Magic 3S waxay la mid tahay tusaalaha asalka ahGudaha iyo dibaddaba, laakiin dhinacyada muhiimka ah qaarkood waxay innaga reebaysaa isbeddello, kuwaas oo ah waxa naga caawinaya inaynu ka dhigno xulashada ugu awoodda badan, taas oo na siin doonta waxqabad weyn markasta. Waa processor-ka kaas oo ah isbedelka ugu weyn ee aan helno, sababtoo ah xaaladdan Snapdragon 855 Plus ayaa la isticmaalaa, taas oo ah jajab loogu talagalay gaar ahaan moodooyinka ciyaaraha, taas oo shaki la'aan ah inay tahay ikhtiyaar caan ah suuqa xagaagan.
Dhinaca kale, noocyada taleefanka ayaa wax laga beddelay, oo yareynaya xulashooyinka. 6GB RAM doorasho ayaa laga saaray, oo ka tagaysa 8 iyo 12 GB oo laga heli karo kiiskan. Wax isku mid ah ayaa ku dhaca mid ka mid ah xulashooyinka keydinta ee isku mid ah. Astaantu waxay wax ka beddeshay nidaamka qaboojinta qalabka. Xaaladdan oo kale waxaan ka helnaa nidaam qaboojin isku dhafan. Waa nidaam ka kooban qaboojiye dareere ah oo maraya tuubbo naxaas ah sidoo kalena leh taageere bartamaha. Isku darkaani wuxuu kaa caawin doonaa inaad hoos u dhigto heerkulkaaga wakhti kasta.
Shirkadda ayaa taas xaqiijisay Nubia Red Magic 3S ayaa lagu iibin doonaa Shiinaha bisha Sebtember 9. Si aan awood ugu yeelano inaan uga iibsano suuqyada kale waa inaan sugnaa wax yar, ilaa Oktoobar. Sida soo-saaruhu ku sheegay soo-bandhigideeda, waxay noqon doontaa bisha Oktoobar marka si caalami ah loo billaabo. Sida la filayo, waxaa sidoo kale laga iibsan karaa Spain.
Qalabka wuxuu ku yimaadaa saddex midab, kuwaas oo ah madow, cawl iyo ikhtiyaar leh midab casaan iyo buluug ah. Halka aan ka helayno laba nooc oo kala duwan oo taleefanka ah marka la eego RAM iyo kaydinta. Qiimaha Shiinaha ee labadan nooc ee Nubia Red Magic 3S horey ayaa loo shaaciyey. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Moodhalka 8/128 GB waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 2.999 yuan (qiyaastii 380 euro in la beddelo)
Nooca leh 12/256 GB waxaa loo bilaabay qiime dhan 3.799 yuan (qiyaastii 480 euro isbeddelka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Red Magic 3S ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
TCL PLEX: Taleefanka casriga ah ee ugu horreeya ee magaciisa lagu magcaabo
Huawei Enjoy 10 Plus: Nooca cusub ee bartamaha